Ngokunikwa lo mbono, ngabe lokhu bekungeyona isimo sokunikela nokuthatha? Nginikeze iWikipedia imali nokuqukethwe. Ngokuphindisela, banginike isikhundla esithuthukisiwe senjini yokusesha kanye namahithi aqondile.
Ngicabanga ukuthi bekungeke kungikhathaze ngaphandle kokuthi sobabili sizuze ebudlelwaneni bethu bebhizinisi esikhathini esedlule. I-Wikipedia ithole kuphela indawo enhle yokusesha injini ngoba: